मद्दत प्राप्त गर्नुहोस् स्क्वॉडल्पसँग तपाईंको व्यवसायको नामकरण गर्न Martech Zone
शुक्रबार, जनवरी 11, 2019 आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
एक ब्रान्डि hor डरावनी कथा सुन्न चाहनुहुन्छ? तपाईंको कम्पनीले यसको प्रक्षेपणको योजना बनाईएको छ र डोमेन, नाम, र प्रक्षेपणमा $ १,150,000०,००० का लगानी गर्छ ... केवल यो सबै बिगार्नको लागि जब तपाईं जान्नुहुन्छ कि एफबीआईले सार्वजनिक नाम जान्छ कि उही नामको अनुसन्धान छ… १२०VE.
यो होइन कि [हालको नाम बिनाको एजेन्सी] ले त्यस प्रकारको मुद्दाको भविष्यवाणी गर्न केहि गर्न सक्थ्यो। म साँच्चिकै आश्चर्यचकित छु, यद्यपि कम्पनीहरूको संख्यामा जसले आफूलाई नाम दिन धेरै मेहनत गर्दैन। मैले ब्रान्डि agencies एजेन्सीहरूसँग एक टन पैसा खर्च गरेको केही व्यवसायहरू थाहा पाएको छु, केवल उनीहरूको नामको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ, वा अर्को उद्योग भित्र पनि समानार्थी अर्थहरू छन् भनेर पत्ता लगाउन।
मैले काम गरेको एक कम्पनीले मलाई जैविक खोजी सहयोगका लागि भाडामा लिए। मलाई तत्काल समस्या यो थियो कि तिनीहरूको ब्रान्ड अर्को उद्योगमा पूर्व अवस्थित अनलाइन स्टोरको पर्यायवाची थियो। नतिजाको रूपमा, त्यहाँ तुरून्त भ्रम थियो कि व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई अनलाइन फेला पार्न सकेनन् ... खोजी परिणामहरूमा तिनीहरूको व्यवसायको नाम टाइप गर्दा पनि।
मैले सहायता गरेको अर्को कम्पनीले गुगलको साधारण खोजी गर्न सक्थ्यो कि उनीहरूको नाम अनुपयुक्त साइटको नजिक छ। तिनीहरूले अझै नयाँ सम्भावनाहरू ल्याउँछन् जुन उनीहरूका कर्मचारीहरूले गलत यूआरएलमा टाइप गरेकोमा खुसी छैनन्।
स्क्वाडल्प एक बजार हो जहाँ तपाईं आफ्नो व्यवसायको नामकरण गर्न, उपलब्ध डोमेन नाम फेला पार्न, र तपाईंको लोगो विकास गर्न मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। उनीहरूले एक महान् ईबुक लेखेका छन् जुन तपाईको ब्यापारको नामकरणका लागि steps चरणहरू पार गर्दछ।
तपाईको व्यवसायको उद्देश्य के हो?
दर्शक को हो कि तपाईंको व्यवसायले सेवा दिनेछ?
तपाईको व्यवसायको बारेमा के अनौठो छ तपाईको व्यक्तित्व के हो?
अन्य रचनात्मकहरूबाट मद्दत लिनुहोस् (त्यो उनीहरूको काम हो) एउटा नामलाई मंथन गर्न।
नाम बाहिर फ्याँकौं जुन मतलब छैन।
अन्य भाषामा तपाईंको नाम भ्रमित वा अनुपयुक्त छैन भनेर निश्चित गर्न भाषिक विश्लेषण गर्नुहोस्।
ट्रेडमार्क मुद्दाहरूको लागि मुद्दा चलाउनबाट जोगिनुहोस्।
तपाइँ लाइभ हुनु अघि यसलाई मान्य गर्नुहोस्!
स्क्वाडल्प रचनात्मकको समुदाय छ जुन तपाईंलाई अनौंठो व्यावसायिक नामहरूको साथ आउँदछ। प्रक्रिया एकदम सीधा छ:
तपाईंको प्रतियोगिता सुरु गर्नुहोस् - तिनीहरूको द्रुत, सजिलो परियोजना संक्षिप्त टेम्प्लेट पूरा गर्नुहोस्, र तिनीहरूले यसलाई 70,000०,००० भन्दा बढि क्रिएटिभहरूको हाम्रो समुदायसँग साझेदारी गर्नेछन्।
विचारहरू भित्र छिराउन सुरू गर्नुहोस् - तपाईं नाम विचारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ - तपाईंको लागि विशेष रूपमा सिर्जना गरिएको - केही मिनेटमा। दर्जनौं प्रतियोगीहरूले एकै समयमा तपाईंको लागि काम गर्छन्! सामान्य नामकरण प्रतियोगिताले धेरै सय नाम विचारहरू प्राप्त गर्दछ। सबै विचारहरू स्वचालित रूपमा URL उपलब्धताका लागि जाँच गरिन्छ।
सहकार्य र संचार गर्नुहोस् - तपाईको प्रतियोगिता ड्यासबोर्डबाट सबै सबमिसनहरू हेर्नुहोस्। प्रविष्टिहरू मूल्या Rate्कन गर्नुहोस्, निजी टिप्पणीहरू छोड्नुहोस्, र सार्वजनिक सन्देशहरू पठाउनुहोस्, सही नाममा प्रक्रियाको अगुवाई गर्नुहोस्।
मान्य गर्नुहोस् - विश्वास संग तपाईंको नाम छनौट गर्नुहोस्। हाम्रो अद्वितीय मान्यीकरण प्रक्रियाले डोमेन चेक, ट्रेडमार्क जोखिम मूल्यांकन, भाषिक विश्लेषण, र पेशेवर दर्शक परीक्षण समावेश गर्दछ।
तपाइँको विजेता छान्नुहोस्! - तपाइँको प्रतिस्पर्धा समाप्त भएपछि, विजेता घोषणा गर्नुहोस् - र नाम दर्ता गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो नामको लागि लोगो डिजाइन वा ट्यागलाइन प्रोजेक्ट सुरू गर्न स्क्वाडेलपमा पनि फर्कन सक्नुहुनेछ।
नामकरण प्रतियोगिता सुरु गर्नुहोस् तिनीहरूको बजार जाँच गर्नुहोस्
खुलासा: म हाम्रो प्रयोग गर्दैछु सम्बद्ध लिङ्कहरू यस पोष्टमा स्क्वाडल्पका लागि।
टैग: तपाईंको व्यवसायलाई ब्रान्डि। गर्दैतपाईंको व्यवसायलाई नामाकरण गर्दै
मानव बनाम च्याटबोटहरू: कसले ग्राहकको ख्याल राख्छ?